Naqshad: Afar Sababood Maxay Tahay shirkadaha Adeegyada Tiknoolajiyadu inay leeyihiin Blog
Waxaa jira shirkado badan oo adeegyada IT-da oo ku raaxaysta adduunka ganacsiga,laakiin sabab uun, kaliya muggeed ayaa leh blog ku yaal boggooda internetka. Tiro badan oo IT ahshirkadaha adeegyadu waxay u hoggaansamaan farsamooyinka iibka dhaqameedka ama waxay ku adkaataa inay aad u adagiyo waqti-qaadashada si ay u ordo blog. Si kastaba ha noqotee, shirkadahaas shirkad maamulaBlog ayaa ugu dambayntii udiyaarin doona abaalmarintaas. Julia Vashneva, Guusha MacaamiishaMaamulaha Semt Adeegyada Dijital ah, wuxuu sharxayaa faa'iidooyinka uu barta blogku keeno shirkadaha adeegyada IT - bush hats for women.
Hoos-u-Qaadista Adeegyada Gaarka ah
Suuq geynta waa qayb muhiim ka ah horumarinta ganacsiga aduunka oo dhan.Ganacsiyo badan ayaa sii socda digital iyo mobile, sidaa daraadeed suuq-geynta moodada ayaa noqotaylagama maarmaanka u ah jiilka ledhka iyo kala duwanaanta Isla mar ahaantaana, kala duwanaanshowaxay noqon kartaa wax yar oo dhibaato ah shirkado badan oo adeegyada IT-da, sida ay ula macaamilaanganacsi isku mid ah maalin kasta. Marka aad abuurayso blog, waxaad abuureysaa wax yaryar,Waxyaabaha kaa dhigi kara inaad ka fogaato dadka badan. Isticmaalka, waxaad muujin kartaa shakhsiyadaada,anshaxa shaqadaada, dabeecadda shirkaddaada, iwm., kaas oo ka caawin doona macaamiisha mustaqbalka inay doortaan shirkaddaada kuwa kale.
Shirkadaha adeegga IT-ga oo badanaa waxay isu bedelaan midba midka kale markay isticmaalaan erey isku mid ah.Haddaba sidee ayay u hubin karaan in ganacsigaaga uu ka fiican yahay shirkad kale? Iyo sidamacaamil macquul ah ayaa arki kara in kooxdiina ay ku fiicantahay si ay shaqada u heshola sameeyey? Shirkadaha adeegyada badan ee IT-gu waxay badanaa ku tiirsan yihiin ereyga afka ama wicitaanka qabowAdeegyada, laakiin blogka fikirka ah ayaa horumarin kara gebi ahaanba kala duwan,habka adag ee lagu helo macaamiisha cusub.
Tusaya Xirfadaha iyo Xirfadaha
Bogga 'About Us' ee bogga shirkad kasta waa mid aad muhiim u ah marka soo jiidashadamacaamiisha cusub. Haddii aad sheegato in maamulahaaga ama hogaamiyahaagu leeyahay sanado badanwaayo-aragnimo, isla sidii shirkad kale oo kale, si cad, waxay u muuqan doontaa qallafsan.Iyada oo la adeegsanaayo blogga, lid ku ah, waxaad muujin kartaa khibradaadaiyo xirfadaha maaraynta, si markaa loogu raali galiyo macaamiishaada mustaqbalka. Waa mid si fududfududahay in la sameeyo, laakiin qoraallada noocan oo kale ah ayaa ka tarjumaya nuxurka waxyaabaha aad rabto inaad kor u qaaddo.
Barta blogku wuxuu noqon doonaa meel aad u weyn oo loogu talagalay keenista bulshada IT-ga.Isla markii aad ku qorto blog-ka shirkadda, waxaad bilaabaysaa dood, taas oo ahwuxuu u furan yahay xirfadlayaasha warshadaha iyo macaamiisha. Warcelinta aad heshayayaa kaa caawin doonta inaad ku horumariso adeegyadaada dad kala duwan. Haddii aad xaq u heshowaxa ku jira bartaada, waxay shirkaddaada ku qori doontaa khariidada
Soo saarista Lead Leads
Daraasadihii ugu danbeeyay waxay muujinayaan in shirkadaha B2B ee isticmaalaya blog ay soo saari doonaan ilaa 67% dheeraad ahhogaamiya shirkadaha aan haysan, iyo shirkadaha B2C ayaa leh saamigan xisaabtan88% sida ku habboon. Markaad abuurayso istaraatiijiyada suuq-galkaaga ee soo galaya,bloggaagu waa inuu marwalba qayb muhiim ah ka yahay. Xaqiiqdii, adigoo isticmaalaya Mashiinka RaadintaFarsamaynta (farsamooyinka) farsamooyinka (SEO) fariimaha blogga waxay ka caawisaa shirkadaha in ay si wanaagsan u helaanqiimeynta. Iyadoo aan lahayn qadar wanaagsan oo la xiriira mowduucyada la xiriira, ma noqon doonto suurtagalsi loo gaaro. Marka aad baddesho boggaaga ujeedooyinka SEO, waxaad u badnaan doontaasoo jiidashada dareenka macaamiisha mustaqbalka.
Bilaabidda iyo socodka blogku wuxuu u baahan yahay dadaal joogta ah qof diyaariyawaayo shaqo adag, cilmi baaris iyo waxay qabaan xiisaha mawduuca. Hase yeeshee, adeegyada ITShirkadaha waa inay ogaadaan saameynta mustaqbalka ee ay ku yeelan karto ganacsiga.Macaamiisha Sare Hay'adda Dijital ah ayaa si guul leh u xaqiijisay in dib u soo noqoshada maalgashiga ee maareynta blogka ay u qalantaa